Awood Sare oo jaban Oo Bacrimiya Shirkado Mashiinka Burburiyo iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Burburiyey Bacriminta Laba-Marxaladaha ah?
Ku Mashiinka Burburiya Labada Marxaladood waa nooc cusub oo burburaya oo si fudud u burburin kara dhuxusha aadka u badan ee qoyaanka, shaleenta, xabagta iyo qalab kaleba kadib baaris muddo dheer qaadatay iyo nashqadeyn taxaddar leh oo ay sameeyeen dadka ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada. Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay inuu burburiyo alaabta ceyriinka ah sida dhuxusha, shale, slag, slag, qashinka dhismaha, iwm Qiyaasta cabbirka walxaha waa ka yar tahay 3mm, waana ku habboon tahay in loo isticmaalo gangue iyo jarjaran ahaan waxyaabo lagu daro iyo shidaalka gudaha ee lebenka warshadaha; waxay xallisaa heerka wax soo saar ee gangue, shale, leben, qalabka derbiga kuleylka iyo qalabka kale ee heerkulka sare leh oo ay adag tahay in la burburiyo.
Mabda'a Shaqada Mashiinka Burburiyey Bacriminta Laba-Marxaladda?
Labada nooc ee rotors-yada kuxiran taxanaha waxay ka dhigayaan walxaha lagu jajabiyey rotor-ka heerka sare isla markaaba mar labaad in lagu burburiyo madaxa dubbaha madaxa rotor-ka hooseeya ee xawaaraha ku wareegaya. Maaddooyinka ku jira daloolka gudaha ayaa si dhakhso leh isugu dhaca isla markaana midba midka kale gunta si uu u gaaro saamaynta budada dubbe iyo budada maaddada. Ugu dambeyntiina, maaddada si toos ah ayaa loogala soo bixi doonaa.
Codsiga Mashiinka Burburiya Labada Marxaladood
Awoodda wax soo saarka: 1-10t / saacaddii
Feed size granule: ≤80mm
Qalabka ku habboon: Humic acid, digada lo'da, cawska, digada idaha, digada digaaga, dhoobada, hadhaaga biogas, dhuxul dhagaxda, slag iwm.
1. Labo rotor laba-marxalad burburin sare iyo hoose ah.
2. Ma jiro shaashad, xoqin xagga hoose, walxo qoyaan badan, oo aan weligood xirmin.
3. Laba-rotor laba-marxalad burburin ah, soo saar ballaaran, dheecaan cabbirka walxaha ka hooseeya 3mm, in ka yar 2mm oo xisaabinaya in ka badan 80%.
4. Xiro dubbaarka isku dhafan ee u adkaysta.
5. Tikniyoolajiyadda isbeddelka isbeddelka gaarka ah.
6. Guryaha biraha ku shaqeeya ee biraha korontada ku shaqeeya.
Muuqaalka Muuqaalka Mashiinka Burburka Laba-Marxaladaha
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laba-Marxalaha ah
Cabbirka cabirka (mm)
Qiyaasta dheecaanka (mm)
Hore: Mashiinka Xashiishka Bacriminta ah ee Burburiya
Xiga: Mashiinka Dhuxul-Baaburka Mashiinka Mashiinka Laba-geesle ah